जुलाई २१ सम्म ठिक ठाक चलेको दौतरीको पानो मेरो कम्प्युटरमा ठ्याक्कै त्यसको भोलि पल्ट अर्थात २२ जुलाई देखि खुल्न छोड्यो । कति कोशिस गरें, क्षणिक रोकावट होला भन्दै फेरि पनि पटक पटक गरेर दौंतरी पेज खोल्ने कोशिस गरें, अहं खुलेन । मैले सोचे कतै रजिष्टर गरेको कम्पनीले दौतरीले डोमेनको भाडा समयमा तिरेन भनेर त वेब साइटमा ताला लगाइदिएन ! दौतरीका एडमिनिस्ट्रेटरलाई पनि सधैं यो बोझ सम्हालिरहंदा दिक्क पो लाग्यो वा फुर्सद नभएर पो कतै हराएको र डोमेन गायब भएको पनि पत्तो नलागेको हो कि ! यस्तै कुराहरु खेलिराखे मेरो मनमा केहि दिन । लामो समय सम्म पनि केहि उपाय नलागे पछि खत्र्याक खुत्रुक यता उता गर्दै गुगलको ब्लग एकाउण्टबाट पसेर हेर्दा एकलव्यको डायरिको “काम कुरो एकातिर “ र ब्रिलियन्टमेनको “ के अरु दलहरु मात्र “ भन्ने लेखमा आंखा पुग्यो अनि बल्ल शंका लाग्यो दौंतरीको गाडी गुडिरहेको रहेछ बरु प्यासेन्जरको रुपमा म नै छुटेको रहेछु ! अनि मैले एक जना साथिलाई अनलाइन भेंटे र उनलाई एक पटक उनको कम्प्युटरमा दौतरी खुल्छ कि खुल्दैन भनेर सोधे, उनकोमा खुल्छ भन्ने जवाफ पाएं, त्यस्तै नेपालियनजीलाई इ-मेलमा सोध्दा पनि कुनै परिवर्तन गरेको छैन भनी केहि बैकल्पिक लिंकहरु समेत दिनु भयो । अहं त्यसबाट पनि खुल्दैन । कुकीहरु डिसएबल्ड भएर डेस्कटपबाट नखुलेको हो कि भनी ल्याप टप बाट पनि कोशिस गरें अहं खुल्दैन । अन्य सबै साइटहरु, ब्लगहरु सबै खुल्छन दौतरीमात्र नखुल्ने ! अफिसमा प्रोक्सी सर्भर प्रयोग हुने र कडा इन्टरनेट सुरक्षा अपनाइएकोले यस्तो भयो होला भन्ने मनमा लाग्यो , र नेट डिपार्टमेन्टबाट नै कुनै दिन यो समस्या हल गरुंला भनेर कुरेर बसें ।
यस बिचमा मैले दौंतरीको लागि लेखेका केहि लेखहरु “शहिद” भए , किनकि पोष्ट गर्न सकिन र दुई हप्ता पछि तिनिहरुको सान्दर्भिकता पनि हरायो ।
अनि आज अर्कै स्थानबाट दौंतरीको बस भेट्टाउन आइपुगे , साथिहरु देख्दा दंग पर्दै ! तर यो बिचमा मलाई लाग्यो एउटा साइट चलाउन धेरै मेहनत लाग्दो रहेछ । प्राविधिक र साज सज्जाका अनि यस्ता नियमित समस्याहरु कसरि समाधान गर्ने भन्ने खुबी नभएको म जस्तो प्राणीलाई बल्ल हाम्रा दौंतरीका एडमिनिस्ट्रेटर “नेपालीयन” जीले गरेको श्रमदानको हेक्का भयो ।
छाडा व्यापारिक ब्लग वा साइटहरु भन्दा भिन्दै रुपले देशको माया गर्नेहरुको बिचारलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को सहित अगाडि बढ्दै गरेको हाम्रो प्रयास जारी राख्न चाने चुने छैन । दैनिक २०० को हाराहारीमा क्लिक हुने साइटलाई कुनै आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बिना अथक संचालन गर्ने नेपालियनजीको परिश्रमलाई चानेचुने मान्न सकिंदैन ।
“म” भन्ने व्यक्तिबादी जुगमा, अझ हामी नेपालीहरुको हकमा यो “म”-पनत्व अझ बढी लागु हुन्छ , तर दौंतरी “हामी” बनेर अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले यसले “इगो” र भावनात्मक कनफ्लिक्टलाई एकातिर पन्छाउन सफल छ र यसरी नै अगाडी बढ्न सफल हुनेछ । छिट्टै यो इन्टरनेट समस्या समाधान गरेर म पनि पुन नियमित दौंतरीहरुसंग यात्रामा सहभागी हुनेनै छु ।